Dilal Qorsheysan oo xalay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dilal Qorsheysan oo xalay siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Keydmedia) - Ciidamada Dowladda ayaa xalay waxa ay toogasho ku dileen Labo nin oo ka tirsan alshbaab kuwasaoo doonayay inay bambooyin ku weeraraan saldhigga Galbeed ee Degmada Dharkenley.
Labada Nin ee la dilay ayaa waxaa usuurtagali weysay inay bambooyinka tuuraan haseahaatee waxa ay durbadiiba bilaabeen inay bistoolado u isticmaalaan goob ay ku sugnaayeen Ciidamo ka tirsan Dowladda KMg-ka ah,inkastoo ay ciidamadu isla goobta ku dileen markii dambe.
Saraakiil ku sugan degmada Dharkeenley ayaa noo xaqiijiyay inay ka qaateen ragga ay dileen Bistoolado iyo bombooyin ay wateen islamarkaasna ay ku fashilmeen ujeedada ay weerarka usoo qaadeen.
Dhanka kale xalay waxa ay kooxo hubeysan Agagaarka Dhismaha hay'adda UNDP ee Muqdisho ay ku toogteen Wiil dhallinyaro ah oo magaciisa lagu soo koobay Zakariye kaasoo xilligaan la sheegay inuu la shaqeynayay hay'ad samaflka ka shaqeysa hase ahaatee horay uga soo baxsaday maleeshiyaadka Kooxda Shabab.
Labad nin ee dilka geysatay oo ku hubeysnaa Bistoolado ayaa goobta ka baxsatay lamana oga ujeedada ay ka damacsanaayeen dilkiisa.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa isasoo tarayay kooxaha ku hubeysan bistooladaha oo dilal qorsheysan ka geysta Goobaha ay ka taliso Dowladda mana jirto wax ay masuuliyiinta Dowladda ka qabteen Dilalkaasi kusoo laablaabtay caasimadda.